Bitpanda - Mụta ahia 2
$ / € / £ 25 kacha nta ego
Bitpanda bụ ụlọ ọrụ Fintech na-eduga na isi na Vienna, Austria.
kacha nta ego $ / € / £ 25
trading Platform Platform Ahịa Web Dabere
Onu ogugu 30
Bitpanda bụ ụlọ ọrụ Fintech na-eduga na isi na Vienna, Austria. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ ngwaahịa na-enye ndị mmadụ ike ịzụta ma chekwaa akụ dijitalụ, kwụọ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ, ahia na ọla dị oke ọnụ, ma gbanwee akụ dijitalụ. Bitpanda, nke dị n'okpuru iwu na nlekọta nke njikwa ego nke Vienna, nwere ihe karịrị otu nde ndị ahịa si gburugburu ụwa. O nwekwara ndị ọrụ karịrị otu narị na iri atọ.
Bitpanda malitere na 2014 site n'aka Christian Turner, Paul Klanschek, na Christian Trummer. Companylọ ọrụ nwere zụlitere ihe karịrị € 43 nde site na In Exchange Exchange Offering (IEO). Ebu ụzọ mara ụlọ ọrụ ahụ dị ka Coinimal.
Bitpanda Uru na ọghọm
N'ime ụwa jupụtara n'ọtụtụ mgbanwe, Bitpanda emeela ikpo okwu nke na-edo onwe ya iche. Companylọ ọrụ ahụ nwere uru ndị a:
Ihe karịrị otu nde ndị ọrụ.
Kensinammuo web na ngwa ngwa.
Udo na nchekwa. Companylọ ọrụ ahụ etinyewo ego iji mee ka ikpo okwu ya dị nchebe.
Mmụta - companylọ ọrụ ahụ nwere ọnụ ụzọ agụmakwụkwọ ebe ọ na-enye ndị ahịa ọzụzụ.
Ọ dị mfe iji - Bitpanda na-enye usoro ikpo okwu dị mfe iji nweta nke ndị ọrụ zuru ụwa ọnụ.
Ọrụ ndị ọzọ - N'adịghị ka mgbanwe ndị ọzọ, Bitpanda na-enye ọrụ ndị ọzọ dị ka ọla na ego
Uzo - Bitpanda enyela otutu ozi banyere ulo oru.
Multiplatform - Bitpanda dị na ntanetị na ngwa ngwa ekwentị.
Ọghọm nke Bitpanda
Platformzụ ahịa ịzụ ahịa nwere ike isi ike maka ndị mbido.
Gwọ nwere ike ịdị elu karịa na ndị ọzọ na-ere ahịa.
N'adịghị ka mgbanwe ndị ọzọ dị n'ịntanetị, Bitpanda na-enye ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ. Ngwaahịa ndị a niile na-enyere ụlọ ọrụ aka ịmepụta okike ebe ndị ọrụ nwere ike ịchọta ngwa ọrụ niile ha chọrọ. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ngwaahịa ndị a:
Bitpanda Pay- Bitpanda Pay bụ ngwaahịa nke na-enyere ndị ọrụ aka ịkwụ ụgwọ ha na iziga ego. Ndị ọrụ nwere ike ịkwụ ụgwọ site na iji ego ego ma ọ bụ iji cryptocurrencies.
Ego Bitpanda - Nke a bụ ngwaahịa na-enyere ndị ọrụ aka ịchekwa ego. Ndị ọrụ nwere ike ịchekwa ego na euro, US dollar, Switzerland Franc, na sterling. Nwere ike ịmepụta ọtụtụ atụmatụ n'ime usoro okike.
Mkpụrụ Bitpanda - Nke a bụ ngwaahịa na-enyere ndị ọrụ aka ịzụta ọla dị oke ọnụ dịka ọla edo, platinum na palladium. A na-echekwa ọla ndị ahụ na ebe nchekwa Switzerland.
Bitpanda gbanwee - Nke a bụ ngwaahịa na-enyere ndị ọrụ aka ịgbanwe ngwa ngwa dijitalụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbanwe Bitcoin gị na Ethereum.
Bitpanda To Go - Nke a bụ ngwaahịa dị na ngalaba karịrị 400 post na ihe karịrị ndị mmekọ post 1,400. Ndị Austrian nwere ike ịzụta crypto na ego na ngalaba ndị a.
Bitpanda Plus - Nke a bụ ngwaahịa na-enye nke na-enyere ndị ọrụ aka ịbawanye oke ha mgbe ịzụrụ crypto. Na mgbakwunye, Bitpanda gbakwunyere na-enyere ndị ahịa aka ịzụta crypto n'elu tebụl.
Mmekọrịta Bitpanda - Ọrụ a na-enye ndị ọrụ na-ezo aka na ndị ọrụ ndị ọzọ ọrụ.
Ejikọtara ngwaahịa ndị a niile na Bitpanda Platform na Bitpanda Exchange.
Bitpanda Kwadoro Akụ
Bitpanda na-akwado ihe karịrị 30 akụ dijitalụ. Ndị a gụnyere Bitcoin, Ethereum, NEO, Ethereum Classic, Tezos, na Ripple n'etiti ndị ọzọ. Ọ na-enyekwa ọla dị oke ọnụ ahịa dịka ọla edo, palladium, na platinum. Tụkwasị na nke ahụ, ọrụ ndị ọzọ dị ka ego na ịkwụ ụgwọ na-enye ndị ọrụ ohere iji ego ego dị ka USD, ster, na euro.
Nye Nwere Ike Iji Bitpanda?
Bitpanda bụ usoro ego dijitalụ. Uru nke akụ dijitalụ bụ na ha na-agafe agafe. Ha na-ekwe ka ndị si mba niile nwee mmekọrịta. N'ihi ya, Bitpanda anaghị enwe ihe mgbochi nke ụlọ ọrụ ego ndị ọzọ na-eche ihu. Ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa niile - belụsọ na US - nwere ike ịmepụta akaụntụ na Bitpanda wee bido ịkpọtụrụ. Agbanyeghị, ndị ọrụ niile kwesịrị inyocha akaụntụ ha.
Kedu ihe bụ Tokpanda Ecosystem Token (Kachasị mma)?
Bitpanda Ecosystem Token bụ akara aka nke Bitpanda mepụtara. Companylọ ọrụ ahụ duziri onyinye mgbanwe mbu nke welitere ihe karịrị 43 nde euro. Dika edere ya, A na-eji akara aka kacha mma na ihe karịrị nde euro 27. Nke a bụ n'ihi na ọnụahịa na-agbanwekarị n'ihi mkpa na ọkọnọ.
Nkuzi: Otu esi edebanye aha na ahia na Bitpanda
Usoro ịbanye na Bitpanda dịtụ mfe ma nwee ike ịme ya na weebụsaịtị yana ngwa ngwa ekwentị ya. Na homepage, ị kwesịrị ị pịa njikọ Bido Ugbu a njikọ. Njikọ a ga-akpọrọ gị gaa na peeji ntinye aka, ebe a ga-agwa gị ka ị jupụta nkọwa nkeonwe gị na ịnakwere usoro na ọnọdụ. Mgbe ị nabatara usoro ndị a, ịkwesịrị inyocha adreesị email gị. Nke a bụ usoro nkịtị ebe ị pịa bọtịnụ ma ọ bụ njikọ ezitere gị.
A ga-enwe nhọrọ abụọ oge ọ bụla ị banyere. Kwesịrị ịhọrọ akaụntụ ebe ịchọrọ ịbanye. Can nwere ike ịhọrọ ma Bitpanda Platform ma ọ bụ Exchange. E gosipụtara nke a n'okpuru.
Bitpanda n'elu ikpo okwu
Onwere ihe di iche netiti Platform na Global Exchange. Ọ bụ n'elu ikpo okwu ka ị ga-ahụ obere akpa gị nke ga - enyere gị aka ịchekwa ma zipu ego. I nwekwara ike pịa obere akpa iji hụ nguzo gị. Ọnụ ahịa njikọ ga-egosi gị ọnụahịa nke akụ niile. Ihe ndị a na-egosi ka ikpo okwu si adị.
Bitpanda Global Exchange bụ ikpo okwu nke na-enyere gị aka ịzụ ahịa na cryptocurrencies na ọla dị oke ọnụ ahịa. E gosipụtara dashboard nke mgbanwe ahụ na foto dị n'okpuru.
Debanye aha ezughị ezu na-enweghị nyocha akaụntụ gị. Nyocha dị mkpa n'ihi na ọ na-enyere ụlọ ọrụ aka ịrụ ọrụ n'ime iwu. Ọ na - enyere ya aka ịmara onye ahịa gị (KYC) na mgbochi ego (AML). Nke a bụ ihe ndị chọrọ niile chọrọ.
Dịka e kwuru n'elu, nzọụkwụ mbụ iji nyochaa akaụntụ gị bụ pịa njikọ ezigara na adreesị email gị. Nzọụkwụ ọzọ bụ ebe ị nyefere foto gị, kaadị njirimara gị ma ọ bụ paspọtụ gị, na akaebe nke ebe obibi gị. Nke ikpeazụ a nwere ike ịbụ ụgwọ ọrụ nwere adreesị gị. Mgbe ị nyefere ihe a niile, ị nwere ike ịga n'ihu itinye ego ma bido ịzụ ahịa. Usoro nyocha na-erughi awa abụọ.
Mgbe ị mechara debanye aha, ịkwesịrị itinye ego na akaụntụ gị. Companylọ ọrụ ahụ nabatara ego na dollar US, euro, Switzerland franc, na sterling. I nwekwara ike itinye ego gị site na iji cryptocurrencies dị ka Bitcoin na Ethereum.
Bitpanda na-anabata nkwụnye ego n'ọtụtụ nhọrọ. Ndị a gụnyere kaadị debit na kaadị akwụmụgwọ na-eji Visa na Mastercard. Ọ na-anakwere obere akpa dị ka Neteller, Skrill, Zimpler, na Sofort. Ọzọkwa, ọ na-anabata nkwụnye ego ozugbo. Ọzọkwa, ịnwere ike itinye ego site na iji Bitpanda To Go, nke dị karịa ebe 400 na Austria. Nhọrọ nhọrọ ndị a niile maka ego euro. Nhọrọ nkwụnye ego Dollar bụ Skrill, Visa, na MasterCard. Nhọrọ ego Switzerland franc bụ SEPA, Sofort, Neteller, Skrill, Visa, na MasterCard. Nhọrọ nkwụnye ego bụ SEPA, Neteller, Skrill, Visa, na MasterCard.
Dịka onye ahịa Bitpanda, ị nwere ike ịdọrọ ego. Achieve mezuru nke a site na ịpị nhọrọ ịdọrọ na akaụntụ gị. Ga-ahọrọzi ego ole ị chọrọ ịdọrọ na nhọrọ ị chọrọ iji. Nwere ike ịdọrọ ego site na iji otu nkwụnye ego nhọrọ ndị anyị kwuru n'elu.
Ego Nchekwa Bitpanda
Dịka e kwuru n'elu, Bitpanda na-ejikwa ọla dị oke ọnụ ahịa. A na-echekwa ọla ndị a na vault echekwara na Switzerland. Chekwa ọla na-efu ego. Dị ka nke a, ụlọ ọrụ ahụ na-ebo ndị ji ụgwọ ego nchekwa ego ndị a. Ego nchekwa kwa izu maka ọla edo bụ 0.0125% ka nke ọla ọcha bụ 0.0250%. Nke palladium na platinum bu 0.0250%.
Etu esi ere ahia site na iji Bitpanda
Mgbe itinye ego na akaụntụ gị, ị nwere ike iji azụmaahịa Global Exchange gosipụtara n'okpuru.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịhọrọ ahịa ịchọrọ ịzụ ahịa na. A na-eme ka ngalaba ahịa pụta ìhè na uhie n'elu. Mgbe ị pulldown ngalaba a, ị ga-ahụ ngwa tradable niile dị.
Mgbe ịhọrọ ego ụzọ ịchọrọ ịzụ ahịa, ọ dị mkpa ka ị mee nyocha nyocha nke ọma. Na-eme nke a site na iji ngwaọrụ ndị gosipụtara na ọcha n'elu. N'ebe a, ị nwere ike ịhazigharị ụdị eserese ahụ, jiri akara aka ọrụ, wee duzie ụdị nyocha niile.
Nyocha a ga - enyere gị aka ịmata ụdị azụmahịa ịchọrọ. Initi na-ebute ahia ahụ n'akụkụ aka ekpe nke gosipụtara na odo. N'akụkụ a, ị họrọ ụdị ahia ịchọrọ. Nke a nwere ike ịbụ usoro ahịa na-atụle ọnụahịa dị ugbu a ma ọ bụ njedebe ma ọ bụ iwu ịkwụsị. Ndị nke abụọ a bụ iwu enyere site na iji ọnụahịa n'ọdịnihu. Họrọzie ego ole ị chọrọ ịzụ ma tinye usoro. Ka ị na-eme nke a, ị ga - ahụ etu ndị ahịa ndị ọzọ si azụ ahịa iji akwụkwọ ahịa iji. Nke a na taabụ na-pụta ìhè inn-acha odo odo.
N'ikpeazụ, mgbe ị mepee ahia gị, ị nwere ike ịlele otú ha si arụ na taabụ My Iwu. E gosipụtara taabụ a na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'okpuru.
Etu esi eji ugwo Bitpanda eme ihe
Bitpanda Pay bụ ọrụ na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ ma zigara ndị ọzọ ego dị mma. Usoro iji ọrụ a dị mfe. Nke mbu, gaa na webusaiti Pkwụ ụgwọ Bitpanda nhọrọ. Ga-ahụ nhọrọ nke ịbanye ma ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ gị. Mgbe ị debanyere aha, ị ga-ahọrọ nhọrọ Bitpanda Platform. Ọ bụrụ na ị nwere ego na akaụntụ gị, ị ga-ahọrọ nzipu nhọrọ ma tinye nkọwa nke onye nnata.
Otu esi eji atụmatụ ego Bitpanda
Atụmatụ ego Bitpanda bụ nhọrọ nke ga - enyere gị aka ịchekwa ego. Nwere ike ịchekwa ego ndị a na fiat ma ọ bụ cryptocurrency. Na Bitpanda Platform, ị ga-ahụ Portal Nchekwa dị ka egosiri n'okpuru. Ikwesiri ibido site na itinye atụmatụ ohuru. Site n'ime nke a, ikpo okwu ga-azụtara gị crypto na akpaghị aka.
Nchedo na nchekwa bụ ihe dị oke mkpa maka mmadụ niile metụtara ụlọ ọrụ crypto. Ọ dị mkpa. Bitpanda, nke bu otu ezigbo ulo oru Austrian fintech etinyela aka iji meziwanye ha abuo. Mkpokọta na ngwa nwere nchebe. Mgbe ị debanyere aha, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ga-agwa gị ma paswọọdụ gị ọ siri ike.
Ihe ọzọ. Companylọ ọrụ ahụ nwere nhọrọ nke nyocha abuo. Nke a na - enye gị ohere itinye koodu nzuzo nke ezigara na adreesị email gị ma ọ bụ nọmba ekwentị iji nweta akaụntụ gị. Site na nkwenye a, ọ na-esiri ndị ọrụ mpụga ike ịnweta akaụntụ gị.
Bitpanda bụ ụlọ ọrụ ndị Ọstrịa. Ndị na-achịkwa ya bụ Ọdụ Ahịa Ahịa Austrian. Ọ bụ ụlọ ọrụ a nyekwara ụlọ ọrụ ahụ ikike ikike ịkwụ ụgwọ dịka iwu Paykwụ Servicesgwọ Ọrụ Ntuziaka 2 (PSD2) si dị. Companylọ ọrụ ahụ na-enyochakwa njirimara ndị ọrụ ya dị ka ekwuru n'elu.
Plọ akwụkwọ Bitpanda
Bitpanda kere ihe mmuta nke ahụ na-akụziri ụmụ akwụkwọ ihe banyere cryptocurrencies. E kere klas ndị ahụ ụzọ atọ. A na-ahazi klaasị ndị mbido maka ndị na-amalite na cryptocurrencies. Usoro nke etiti na aka nke ọzọ bụ maka ndị “gụsịrị akwụkwọ” na klaasị ndị mbido. A na-ahazi nkuzi Ọkachamara maka ndị na-aga n'ihu na klaasị nke etiti. Klaasị ndị a na-akasị dabeere na ederede na ụfọdụ videos. Inwe klas ahụ bụ ihe dị mma n'ihi na ọ na-enye ndị ahịa ozi ha chọrọ iji bụrụ ndị ahịa ka mma.
Ọrụ Ndị Ahịa Bitpanda
Bitpanda nwere ahụmịhe ndị ahịa nke oge a. Ndị ọrụ nwere ike ịbanye na ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ dị mfe site na bọtịnụ nkata ya na weebụsaịtị. Igodo enyemaka na-enye ndị ọrụ azịza na ajụjụ ndị kachasị. Ndị ọrụ nwekwara ike ịnye arịrịọ na a na peeji nke. Da bi, Bitpanda de n’adwene sii mfonini no so.
Bitpanda weebụsaịtị: www.bitpanda.com
Bitpanda jikọrọ: https://www.linkedin.com/company/bitpanda/
Bitpanda gam akporo App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitpanda.bitpanda&referrer=utm_source%3Dwebsite%26utm_medium%3Dplaystorebtn